Wadashaqeynta PLOS iyo TCC Africa si ay u taageeraan Baarayaasha Afrika - AfricArXiv
Qorshe hawleedka 2020 - 2023
Ku darso shaqadeena
Wadashaqeyn: Horumariyaha hormarinta - kormeerka maalgelinta
Fur Madbacadda Daabacaadda
Isbaarooyinka Tayada leh
Ku soo gudbi figshare
Ku soo gudbi Qeios
U wac Baarayaasha Afrikaanka ah
Dardargelinta Sayniska Cilmu-nafsiga
TREND ee Afrika barnaamijka iskaashiga khadka tooska ah
Ku soo biir AfricArXiv barnaamijka JOGL
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan COVID-19 oo ku qoran afafka Afrikaanka ee gobolka
Uruurinta sayniska 'COVID-19' iyo 'Africa' (ext. Url)
Shabakadda Hub & Search
Wadashaqeynta PLOS iyo TCC Africa si ay u taageeraan Baarayaasha Afrika
Published by Johanssen Obanda on 19th May 2021 19th May 2021
Waxaan ku faraxsanahay inaan wadaagno warka ah in daabacaha Furan Furan ee PLOS iyo lamaanaheena, Xarunta Tababarka ee Xiriirka (TCC Africa) ay si rasmi ah uga wada shaqeynayaan sidii loo horumarin lahaa mustaqbal Saynis Furan oo loo wada dhan yahay.
Marka la joogo AfricArXiv, waxaan sii wadi doonnaa sameynta daabacaadda furan ee Workflows guud ahaan gobollada adduunka iyo daabacayaasha la heli karo, la awoodi karo oo faa'iido u leh dhammaan bulshada Afrikaanka ah ee aqoonta leh. Waxaan ku biireynaa TCC Africa iyo PLOS dadaalkooda si kor loogu qaado loona kordhiyo qaadashada marinka furan iyo sayniska si ballaaran.
Tani waa ku dhawaaqida ay sameysay TCC Africa ee ku saabsan iskaashiga.
The Furan faafaahinta PLOS, Iyo Xarunta tababarka ee Isgaarsiinta, oo xarunteedu tahay Jaamacadda Nairobi, Kenya, (oo loo yaqaanno TCC Afrika) ayaa ku dhawaaqday iskaashi si loo hubiyo in danaha iyo qiyamka bulshooyinka cilmi-baarista Afrika ay wakiil uga yihiin daabacaadda, siyaasadaha, iyo adeegyada PLOS. Labada urur waxay ka wada shaqeyn doonaan barashada iyo wada-sameynta dariiqyada loo maro Cilmi-baarista Furan ee u shaqeysa cilmi-baarayaasha Afrikaanka ah iyo daneeyayaasha ku dhex jira nidaamka cilmi-baarista bulshada iyagoo ilaalinaya mabaadi'da aasaasiga ah ee Cilmi-baarista Furan.
"Tani waa bilowga iskaashi la yaab leh oo ka taageeri doona daneeyayaasha tacliinta sare qaadashada sayniska furan, kaas oo gacan ka geysan doona kordhinta muuqaalkooda cilmi baarista," ayay tiri Joy Owango, Agaasimaha Fulinta TCC Afrika. "PLOS iyo TCC Afrika waxay leeyihiin ujeedooyin isku mid ah oo lagu taageerayo cilmi-baarista iyo bulshada tacliinta iyaga oo dimoqraadiyeeynaya cilmi-baarista iyada oo loo marayo ku-meel-gaar wax ku ool ah sayniska furan."
Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay inaan la shaqeyno Joy iyo TCC Africa. TCC Africa waa shuraako dabiici ah PLOS, maadaama ururadeenu ay wadaagaan hadafyo isku mid ah, ”ayay tiri Roheena Anand, cinwaankeeda, PLOS. "Labadeenaba waxaa naga go'an inaan sii kordhino ku dhaqanka cilmiga furan iyo kordhinta matalaada iyo ka mid noqoshada cilmi baarista Afrika ee heer caalami ah, laakiin siyaabaha lagu horumariyo, sidaa darteedna loogu shaqeeyo, bulshada maxalliga ah."
Ku saabsan TCC Africa
Xarunta Tababarka ee Xiriirka (TCC Africa), waa xaruntii ugu horreysay ee tababar ku saleysan Afrika oo baraysa xirfadaha isgaarsiinta wax ku oolka ah saynisyahannada. TCC Afrika waa hay'ad abaalmarin ku guuleysatay, oo loo aasaasay hay'ad aan faa'iido doon ahayn 2006 lagana diiwaangeliyey Kenya. TCC Afrika waxay bixisaa taageero karti ah oo lagu hagaajinayo wax soo saarka iyo aragtida cilmi baarayaasha iyadoo loo marayo tababar ku saabsan cilmiga iyo isgaarsiinta sayniska.
Ku saabsan PLOS
PLOS waa mid aan faa'iido doon ahayn, Daabacaha Furan Awood-siinta cilmi-baarayaasha si loo dardar-geliyo horumarka sayniska iyo daawada iyadoo la hoggaaminayo is-beddel ku yimaada is-gaarsiinta cilmi-baarista. Waxaan jabinaynay xuduudaha ilaa aasaaskeenii 2001. joornaalada PLOS waxay dhaqaajiyeen dhaqdhaqaaqa OA beddelka joornaalada rukunka. Waxaan aasaasnay ​​daabicitaankii ugu horreeyay ee edbinta badan oo ka kooban dhammaan cilmi-baarista heer sare ah iyadoon loo eegin cusboonaysiinta ama saameynta waxaanan muujinnay muhiimadda ay leedahay helitaanka xogta furan. Maaddaama Sayniska Furan uu sii socdo, waxaan sii wadeynaa tijaabinta siinta fursado badan, xulashooyin, iyo macnaha aqristayaasha iyo cilmibaareyaasha.
Ogeysiiskan waxaa markii hore lagu daabacay tcc-africa.org/plos-and-tcc-africa-partnering-to-support-african-researchers/
Warar muuqaaleed leh PLOS iyo TCC Africa
Ku darsasho ahaan Asxaabta Dib-u-eegista Usbuuca 2020, TCC Afrika iyo AfrikArXiv waxay abaabuleen mareeg internet si ay qoto dheer ugu galaan horumaro teknolojiyad cusub oo ku wajahan Rapid iyo Open Peer Review. In ka badan 300 oo daabacadood (qoraalladii hore iyo maqaallo joornaal ah) ayaa lagu heli karaa iyadoo lagu sharraxayo internetka COVID-19 Cilmi baaris ku saabsan iyo ku saabsan Afrika
Anaga, koox ka mid ah daabacayaasha iyo ururada isgaarsiinta aqoonyahanada ah, waxaa naga go'an inaan ka wada shaqeyno dib-u-eegis deg deg ah oo dib-u-eegis deg deg ah iyo dib-u-eegis ku saabsan wareejinta wareejinta si aan u weyneyno waxtarka iyo xawaaraha kala-sooca iyo hannaanka dib-u-eegista asxaabta ee baaritaanka COVID-19.
U wac ficil: COVID-19 Dib u Eegis Deg Deg ah
Tags: marin furansayniska furanPLOSdaabacaaddaTCC Afrika
Categories Select Category Ogeysiis (11) Awood dhisida (7) Wadashaqeyn (27) COVID-19 (31) Dhacdo (6) Guud (9) Qalabka (1) Aqoonta asaliga ah (3) Wareysi (8) Kala duwanaanta luqadda (8) Furan Furan (36) Sayniska Furan (16) Iskaashiga ku dhawaaqida (2) Dib-u-eegista asxaabta (7) Podcast (1) Diyaargarow (11) Daabacaadda (14) Warbixin (1) Isgaarsiinta Sayniska (17) Soo gudbinta (7)
Baaritaan Afrikan ah Sirdoonka Artificial ASAPbio BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Xarunta Sayniska Furan chatbot Covid-19 Wadahadalka Xawaaladaha Dijitaalka ah Baadhista Soo saarista cilmi baarista Afrika Eider Afrika Ururinta Joy Owango Luqad Dhaqameed Natural Jaamacadda Islaamiga ee Omdurman marin furan furan Wadaag furan Fur Khariidadaha Aqoonta furan dib u eegis kasta sayniska furan Qaab-dhismeedka Sayniska ee Furan OSF Dib-u-eegidda Aragga daabacaadda Dib u eegis daabacaadda PubPub dib u eegis deg deg ah Dib-u-dejinta Research Roadmap Isgaarsiinta Aqoonta Isgaarsiinta Sayniska ScienceOpen SDG2 Sudan Himilooyinka Horumarka Sare TCC Afrika Tarjun Saynis tarjumaada Uganda Zero Hunger
Dhaqanka ugu Fiican iyo Qaabka Cusub ee loo wajahayo Dib u Eegista Asxaabta
AfricArXiv, Eider Africa, TCC Africa, iyo PREreview waxay ku biirayaan xoogaga si ay isugu keenaan saynisyahano ka kala socda Afrika iyo saynisyahano ku howlan cilmi baarista la xiriirta Afrika oo loogu tala galay taxane ah 3 wada hadallo dalwaddii iyo dib u eegis iskaashi.
Daahfurka Tarjumaadda Sayniska
Translate Sayniska wuxuu xiiseeyaa tarjumaadda suugaanta cilmiga. Translate Science waa koox furan oo mutadawiciin ah oo xiiseynaya hagaajinta tarjumaadda suugaanta sayniska. Kooxda ayaa isu timid si ay u taageerto shaqada qalabka, adeegyada iyo u doodaha tarjumida sayniska.
TCC Africa iyo Eider Africa waxay iskaashi la sameeyeen Mentor Baarayaasha Xirfadaha Hore ee ka socda Sub Sahara Africa
Haddii aad cilmi-baare tahay, waxaad u badan tahay inaad aqoon u leedahay nolosha cilmi-baarista iyo dhammaan caqabadaha iyo fursadaha la socda. Waa war fiican haddii aad tahay cilmi-baare ka socda Saxaraha Afrika Akhri wax dheeraad ah…
Dheef-shiidka bilaha ah ee AfricArXiv
AfrikaArXiv content waa CC BY 4.0 shatiyeysan - ku shaqeeya Helitaanka 2 Muuqaal